पाँचसय वर्षदेखि मासु र मदिरा निषेधित एउटा गाउँ, यस्तो छ कारण ! « Nagarik Khabar
पाँचसय वर्षदेखि मासु र मदिरा निषेधित एउटा गाउँ, यस्तो छ कारण !
प्रकाशित मिति : 8 January, 2021 5:03 pm
एजेन्सी । भारतको उत्तर प्रदेशस्थित देवबन्दमा एउटा गाउँ छ, जहाँका स्थानीयले खानपान र रहनसहनका विषयमा विश्वलाई अचम्मित बनाएका छन् । देवबन्दबाट करिब ५ किलोमिटभित्र रहेको मिरगपुर सात्विक खानपानका लागि चर्चित ठाउँ हो ।
करिब १० हजार आवादी रहेको मिरगपुर सात्विक भोजन र धुम्रपान तथा मद्यपानरहित गाउँको रुपमा भारतभर चर्चित रहेको छ । बताइएअनुसार मिरगपुरमा पछिल्लो ५ सय वर्षदेखि शाकाहारी भोजन गरिँदै आएको छ ।
करिब ५ सय वर्षअघि उक्त गाउँमा बाबा गुरु फकिरा दास आएका थिए । दासले गाउँका स्थानीयसँग सात्विक भोजन गर्दै धुम्रपान र मद्यपान छाडेको अवस्थामा गाउँमा समृद्धि आउने बताएका थिए । जसको पालना गाउँका मान्छेले १७औँ शताब्दीदेखि गरिरहेका छन् ।
गाउँलाई नशामुक्त बनाउनका लागि केही युवाहरुले अभियानमार्फत योगदान दिएका थिए । इण्डिया बुक अफ रेकर्डमा गाउँको नाम दर्ज भएपछि त्यहाँका स्थानीयले यसलाई ठूलो उपलब्धि मानेका छन् ।
गाउँमा प्राय गुज्जर जातीका मानिसहरु रहेका छन् । मिरगपुरमा पाहुना लाग्न जाने व्यक्तिलाई समेत धुम्रपान तथा मद्यपान र मांसाहारी भोजनको अनुमति नभएको बताइएको छ । यसअघिनै मिरगपुर गाउँ नशामुक्त घोषणा भइसकेको छ ।